DHAGEYSO Kulanka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta korom la’aan u baaqday. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Kulanka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta korom la’aan u baaqday.
Kulan lagu waday inay maanta ku yeeshaan Magaalada Muqdisho xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa korom la’aan u baaqday sidda uu warbaahinta u sheegay Gudoomiyaha golaha shacbiga Soomaaliyeed Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan.
Xildhibaanada Baarlmaanka Soomaaliya ayaa lagu waday inay kulanka uga hadlaan aqrinta koowaad ee hindise sharciyeedka duulista hawada iyo aqrinta labaad ee hindise sharciyeedka mashruuca liil tirka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin in kulankii Baarlamaanka uu Kooram La’aan u baaqdo wuxuuna fariin u diray xildhibaanada aan soo xaadirin fadhiyada baarlamaanka ee Muhiimka ah.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in lala xisaabtami doona Xildhibaanadii maanta baaqday,islamarkaana kulanka soo socda Magacyadooda la yeerin doono.
Qaarka mid ah xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xildhibaanada maanta kulanka ka maqnaa ay intooda badan ku maqan yihiin howlo qaran gaar ahaan arimaha ku saabsan doorashooyinka maamulada Koonfur Galbeed iyo Puntland oo dhawaan lagu wado inay doorasho ka dhacdo.
← DHAGEYSO Banaanbax Ciidamaa AMISOM looga soo horjeedo oo maalinkii labaad Muqdisho ka dhacay.
Ardaydii lagu afduubtay Cameroon oo la soo siidaayay →